Loza mitatao ny “poto”an’ny Jirama: Ambohimanandray, Ambohimanarina | NewsMada
Loza mitatao ny “poto”an’ny Jirama: Ambohimanandray, Ambohimanarina
Par Taratra sur 25/11/2021
Tratry ny be marenina ny fitarainana. Efa an-taony maro ny antso avo nataon’ny mponina ao Ambohimanandray Ambohimanarina ny amin’ny tokony hanoloana ny andrin-jiro vita amin’nyhazo, efa konkan’ny ela ary efa poakaty tanteraka amin’izao fotoana izao. Ahiana sy atahorana mafy ny mety hianjerany, indrindra amin’ireo mpivarotra eo amoron-dalana eo sy ny trano manodidina. T
Tsy nandray ny fitarainana ny teo anivon’ny fokontany fa nasain’izy ireo nanantona mivantana ny Jirama ny fokonolona.Tsy mbola nahitam-baliny izany hatramin’izao na efa ahiana atahorana mafy aza ny hianjerany.
Marihina anefa fa lalana tena hifamezivezen’ny besinimaro ny misy azy ity. Tsy sasatry ny miantso ireo tompon’andraikitra voakasik’izany ny mponina, ny amin’ny tokony hanoloana faran’ny haingana io andrin-jiro io, hisorohana ny loza. Anaty fotoam-pahavaratra, amin’ny orana sy ny rivotra rahateo isika izao.